w. faratoon Dalal badan oo Afrikaan ah oo Taageerey Aqoonsiga Somaliland – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA w. faratoon Dalal badan oo Afrikaan ah oo Taageerey Aqoonsiga Somaliland
w. faratoon Dalal badan oo Afrikaan ah oo Taageerey Aqoonsiga Somaliland
Somaliland waxay sheegaysaa in dhowr waddan oo Afrikaan ah ay muujiyeen rabitaankooda ah inay waddanka u aqoonsadaan dal madax-bannaan.
Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Yaasiin Xaaji Maxamed ayaa sheegay in dalal badan oo Afrikaan ah ay taageerayaan tallaabada ay Somaliland ku doonayso gooni-isu-taagga.
Isaga oo ka hadlayey barnaamij webinar ah oo uu martigaliyay xafiiska xidhiidhinta Somaliland ee magaalada Nairobi, Xaaji uma magacaabin wadamada sababo la xidhiidha diblomaasiyadeed laakiin wuxuu si cad u sheegay in Afrika ay taageersan tahay horumarka qaranka.
“Waxaan ku kalsoonahay in sida ugu dhaqsaha badan ama waqti dambe aan shaki ku jirin in la na aqoonsan doono. Waxaan la xiriireynaa tiro badan oo wadamo Afrikaan ah oo ka warqaba xaaladdeena oo aan rajeyneynaa inay horseedi doonaan hogaan gacan ka geysan doona sidii aan u aqoonsan lahayn, ”ayuu yiri wasiirku intii lagu gudajiray webinar-ka oo lagu xusayo 60 sano tan iyo markii wadanku xornimada ka qaatay Ingiriiska. .
Waxa ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha webinar waxaa ka mid ah Dr Edna Adan wasiirkii hore ee arrimaha dibada Somaliland, Danjire Mahboub Maalil Xoghayihii hore ee fulinta ee IGAD, Geeska Afrika falanqeeyaha aqoonyahan deggan Xarunta Ganacsiga Mareykanka Michael Rubin Martin Jay oo abaalmarinta suxufiyadda Ingiriiska ku guuleystey isla markaana ah weriye u shaqeynayay. Daily Mail (Boqortooyada Ingiriiska), C / raxmaan Ismaaciil oo lataliye ka ah maalgashiga waaxda Tamarta iyo Danjire Bashe Cumar oo ah madaxa xafiiska xidhiidhka Somaliland ee Nairobi.
Wasiirka ayaa sheegtay in Somaliland ay leedahay fursado dhowr ah oo ay ugu jirto raadinta aqoonsi caalami ah oo ay kujirto inay dacwad ka gudbiso maxkamada caalamiga.
“Waxaan miisaameyneynaa dhammaan xulashooyinka, mana ka noqon karno,” ayuu yidhi.
Waxa uu sheegay in wada hadalada hada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya ee Jabuuti ay tahay talaabo loo qaaday jihada saxda ah laakiin bulshada caalamku u baahan tahay inay kaalin muuqata ka qaadato sidii loo hubin lahaa wada hadalada inay soo baxaan natiijo wanaagsan.
Danjire Baashe waxa uu sheegay in beesha caalamku ay dadaallo ku bixisay sidii ay warbaahinta uga dhex heli lahayd khilaafaadka ku lugta leh dalal kale taasna ay tahay in sidoo kale lagu sameeyo wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland.
“Waxaa loo baahan yahay dadaal caalami ah oo laga helo bulshada caalamka si ay uga mid noqdaan wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland. Waxaan ku jirnaa xaaladdan sababta oo ah bulshada caalamku muddo dheer ayeey qaadatay. ”
Bashe wuxuu daliishaday kiiska Suudaan iyo Koofurta Suudaan iyo Itoobiya iyo Ereteriya waqtiyadii hore wuxuuna sheegay in kiiska Soomaaliya iyo Somaliland uusan ahayn mid gaar ah.
Dr Edna waxay carqaladeysay Mareykanka inay muujiyaan dadaal dheeri ah oo ku aaddan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa gobolka Geeska Afrika.
“Mareykanka wuxuu muujinayaa xiisaha cusub ee geeska Afrika kaasoo ah mid wanaagsan maxaa yeelay sanado badan, siyaasadooda arrimaha dibedda ee la xiriirta geeska Afrika waa lagu guuldareystay,” ayay tiri.
Previous article50 qof ayaa ku dhintey mudaaharaadyo kadhacay wadanka Itobiya
Next articleMasar ayaa dib u fureysa garoomo diyaaradeed, kuna soo dhoweyneysa dalxiisayaasha.
Soomaaliya iyo Marooko oo is weydaarsaday xogo ku aaddan garsoorka